Gaazexeessotaa fi kanneen marsaa interneetii irratti barreessanii fi himannaan shorokeessummaa irratti dhiyaatee hidhaa keessa turan keessaa Riyoot Alamuu VOAf ibsa kennitee jirti. - Welcome to bilisummaa
Gaazexeessotaa fi kanneen marsaa interneetii irratti barreessanii fi himannaan shorokeessummaa irratti dhiyaatee hidhaa keessa turan keessaa Riyoot Alamuu VOAf ibsa kennitee jirti.
bilisummaa July 10, 2015	Leave a comment
Riyoota yoomiif attamiin akka gad dhiisamte waahila keenya Solomon Abatef akkas jechuun ibsite.
Previous Dr. Namera, Dr. Galane and Dr. Obsa returning to assure the safety and health of Oromo Soccer Tournament.
Next Qabsoon keenya hamma dhumaatti itti fufa…